Archives tag: sony
Dom » Entries tagged with "sony"
PlayStation 5 miaraka amin'ny vidiny vaovao sy avo kokoa! Mampalahelo fa tsy manana vaovao tsara izahay
Efa natomboka ny fiakaran'ny vidin'ny konsol PlayStation 5. Niakatra PLN 100 ny kinova miaraka ary tsy misy kapila. Mahaliana fa ny fiakarana dia nifanindry tamin'ny fahazoana ambany ny consoles any Polonina. Vidiny ho an'ny ...
Eo amintsika, hivoaka amin'ny PlayStation amin'ny faran'ity taona ity
eo amintsika, PlayStation, playstation 4, playstation 5, Sony
Tokony hiaiky aho fa ny laza malaza indrindra eto amintsika dia ao aoriantsika. Na eo aza izany dia manandrana mamporisika ireo mpilalao hiverina amin'ny lohateniny amin'ny alàlan'ny fanavaozana vaovao ireo mpandraharaha. Miverina eto amintsika! Nandritra ny State of ...
PlayStation 5 dia efa amidy indray! Media Markt dia manolotra andiany mahaliana
hampionona, mediamarkt, PlayStation, playstation 5, fizarana voalohany, Sony
Ny console PlayStation 5 dia amidy indray amin'ny kinova Digital sy amin'ny kinova misy mpamaky Blu-ray 4k Ultra HD. Media Markt dia nanolotra andiany telo, izay ankoatry ny console, manana lalao sy fanampiny hafa koa izahay ...
Sony dia manambara ny Toolkit Solutions Media miaraka amina karazana mikroservika
Ny vahaolana vaovao mifototra amin'ny rahona an'ny Sony dia hanamora kokoa ny fahitalavitra sy ny mpamokatra amin'ny fananganana, fanavaozana ary famolavolana ny rafitra fitantanana haino aman-jery azy manokana arak'izay ilaina. Nanambara serivisy mikraoba mifototra amin'ny rahona i Sony. Vaovao...
Air conditioner avy any Sony fanindroany. Inona no ho vokatr'izany?
rivotra javatra mampahalefaka, Sony
Ny kinova voalohany an'ny Sony Reon Pocket dia nanomboka tamin'ny volana jolay tamin'ny taon-dasa. Tamin'izany fotoana izany dia azo vidiana amin'ny setany misy T-shirt manokana ity mari-panafody ity. Mety maharitra adiny iray sy sasany ny bateria, ary ny ...
Misaotra an'i Exprivia sy Sony, ny tahirin-kevitra momba ny fanjakan'ny tany dia azo antoka mandritra ny 100 taona
exprivia, kosmos, zanabolana, Sony
Ny serivisy fitehirizana tahiry ho an'ireo zanabolana ampiasaina amin'ny programa Copernicus Sentinels dia miasa: ny angona avy amin'ny European Space Agency dia ho voarakitra amin'ny haino aman-jery optika voalohany any Eropa ary azo am-polony taona maro. Exprivia, miasa miaraka amin'i Sony, dia ...
PlayStation 5 no konsolin'ny varotra haingana indrindra. Ary izany na eo aza ny tsy fahampian'ny trano fitehirizana!
Raha ny angon-drakitra avy tao anatin'ny efa-bolana lasa izay, dia nikajiana fa ny fivarotana PlayStation 5 dia niteraka tombony ambony indrindra tany Etazonia tamin'ny tantara tao anatin'ny fotoana fohy. Ny PS5 dia very amin'ny isan'ny singa amidy miaraka amin'ny Nintendo Switch ihany. Very ny Playstation 5 ...
Aftonbladet dia nampiakatra ny fenitry ny famokarana vaovao amin'ny fakantsary IP lavitra an'i Sony
ip fakan-tsary, Sony
Ny mpanonta ny iray amin'ireo gazety be mpamaky indrindra ao Scandinavia dia nanamboatra ny foibem-pamokarana horonantsary tao Stockholm tamin'ny fakantsary Sony sy ny monitor BRAVIA, izay nahasarika kokoa ny mpampiasa Internet. Ny Aftonbladet isan'andro dia navoaka nandritra ny 200 taona lasa. Ary na dia tsy "mpandefa" aza izy ...
Sony dia namela ny fanitarana ny fahatsiarovana PlayStation 5
27 Febroary 2021
Ny premiere an'ny taranaka vaovao an'ny konsole dia nitranga telo volana lasa izay. Amin'izao fotoana izao anefa, voafetra ihany ny fisian'izy ireo, ka sarotra ny maneho hevitra momba ny lazany. Hitanay vao tsy ela fa ...